Coronavirus ကို နှိမျနှငျးနိုငျဖို့ ဒျေါလာ ၁၂ ဘီလြံ အကုနျအကခြံပွီး ကူညီသှားမယျ့ဘဏျကွီး။ – SoShwe
Home/Banking & Finance/Coronavirus ကို နှိမျနှငျးနိုငျဖို့ ဒျေါလာ ၁၂ ဘီလြံ အကုနျအကခြံပွီး ကူညီသှားမယျ့ဘဏျကွီး။
Coronavirus ကို နှိမျနှငျးနိုငျဖို့ ဒျေါလာ ၁၂ ဘီလြံ အကုနျအကခြံပွီး ကူညီသှားမယျ့ဘဏျကွီး။
So Shwe March 5, 2020	Banking & Finance Leaveacomment
လှနျခဲ့တဲ့ အင်ျဂါနကေ့ ကမ်ဘာ့ဘဏျပိုငျရှငျ David Malpass က ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ အဆုတျရောငျရောဂါ ကပျဘေးကွီးကို ရငျဆိုငျနရေတဲ့ နိုငျငံတှကေို အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၂ ဘီလြံ အကုနျအကခြံပွီး အဆိုပါရောဂါဆိုးကွီးကို တိုကျထုတျနိုငျဖို့အတှကျ အကူအညီပေးသှားမယျလို့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲပွုလုပျပွီး သတငျးဌာနတှကေို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ Coronavirus ဟာ ဆားဈရောဂါ၊ မားဈရောဂါတို့နဲ့ သဏ်ဍနျတူ အဆုတျရောငျရောဂါကို ဖွဈပှားစနေိုငျပါတယျ။ အဆိုပါအဆုတျရောငျရောဂါဟာ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလမှာ တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျမွို့မှာ စတငျဖွဈပှားခဲ့ပွီး ထိုရောဂါဟာ အခုလကျရှိအခြိနျမှာဆိုရငျတော့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက နိုငျငံတျောတျောမြားမြားမှာ ဖွဈပှားနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါအဆုတျရောငျရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသူဦးရကေို နိုငျငံတကာနဲ့ခြီပွီး ရညျတှကျမယျဆိုရငျတော့ သဆေုံးသူဦးရဟော ၃၀၀၀ ကြျောနပွေီဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါရောဂါကို ခံစားနရေတဲ့ ဝဒေနာရှငျဦးရဟောလညျး ၉ သောငျးကြျောနပွေီဖွဈပါတယျ။ Coronavirus ကွောငျ့ အဆုတျရောငျရောဂါဝဒေနာခံစားခဲ့ရသူဦးရေ အနညျးအကဉျြးကသာ ပွနျလညျကနျြးမာလာကွတယျလို့လညျး သိရှိထားပါတယျ။
Mr. Malpass က “ဒီကပျရောဂါဆိုးကွီးကို တိုကျထုတျနရေတဲ့ ဆငျးရဲတဲ့နိုငျငံတှကေို လုံလောကျတဲ့ ဆေးပစ်စညျးတှဝေယျယူရရှိနိုငျဖို့အတှကျ ဦးစားပေးပွီး ကူညီပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာလညျး Mr.Malpass က “အသကျမြားစှာကို အဆုံးရှုံးမခံရဖို့အတှကျ မွနျမွနျဖယျရှားနိုငျလေ အကောငျးဆုံးဖွဈလပေါပဲ။” လို့ ထပျလောငျးပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Coronavirus ကို နှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံ အကုန်အကျခံပြီး ကူညီသွားမယ့်ဘဏ်ကြီး။
လွန်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က ကမ္ဘာ့ဘဏ်ပိုင်ရှင် David Malpass က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကပ်ဘေးကြီးကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံတွေကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံ အကုန်အကျခံပြီး အဆိုပါရောဂါဆိုးကြီးကို တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် အကူအညီပေးသွားမယ်လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီး သတင်းဌာနတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Coronavirus ဟာ ဆားစ်ရောဂါ၊ မားစ်ရောဂါတို့နဲ့ သဏ္ဍန်တူ အဆုတ်ရောင်ရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆုတ်ရောင်ရောဂါဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုရောဂါဟာ အခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဖြစ်ပွားနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေကို နိုင်ငံတကာနဲ့ချီပြီး ရည်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ သေဆုံးသူဦးရေဟာ ၃၀၀၀ ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရောဂါကို ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်ဦးရေဟာလည်း ၉ သောင်းကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Coronavirus ကြောင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ရသူဦးရေ အနည်းအကျဉ်းကသာ ပြန်လည်ကျန်းမာလာကြတယ်လို့လည်း သိရှိထားပါတယ်။
Mr. Malpass က “ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို တိုက်ထုတ်နေရတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကို လုံလောက်တဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဦးစားပေးပြီး ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်း Mr.Malpass က “အသက်များစွာကို အဆုံးရှုံးမခံရဖို့အတွက် မြန်မြန်ဖယ်ရှားနိုင်လေ အကောင်းဆုံးဖြစ်လေပါပဲ။” လို့ ထပ်လောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Previous ????????????? ?????????????? ?????????????? YouTuber ???????
Next ???????????????????????? ??????????????????????????